Ma ka baqay xukunkii ugu dambeeyay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Markaan fahamno inaan ku nool nahay, ku duubno oo aan ku jirno Masiixa (Falimaha Rasuullada 17,28), Eebaha abuuray wax walba oo wax walba furtay oo hadana shuruud la'aan nagu jecel, waxaan iska fogeyn karnaa cabsida iyo walwalka ku saabsan halka aan Ilaah la taaganahay, oo runtii ku bilaabi karno hubaal isaga Jacaylka iyo awooda hagida inaan ku nasanno nolosheena.
Injiilku waa war wanaagsan. Runtii waa war wanaagsan oo aan dadkoo keliya ahayn, laakiin qof walba: "Isaga (Ciise) dib-u-heshiisiinta dembiyadeenna, ma ahan oo keliya kannada, laakiin wuxuu sidoo kale u yahay kuwa adduunka oo dhan ” (1 Yooxanaa 2,2).
Waa wax laga xumaado, laakiin run, Masiixiyiin badan oo rumeysan ayaa ka baqaya xukunka ugu dambeeya. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, haddii aan nafteena daacad u nahay, dhammaanteen waan ognahay inaannaan ku filnayn caddaaladda Ilaah ee kaamil ah siyaabo badan. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee aan ka xusi karno maxkamadda waa aqoonsiga garsooraha. Garsooraha xukumi doona xukunka kama dambeysta oo aan ahayn Ciise Masiix, Bixiyahayaga iyo Badbaadiyahayaga!
Sidaad ogtahay, Kitaabka Muujintii wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo uu ka odhanayo xukunka ugu dambeeya. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa inay u dhawaaqaan cabsi marka aan ka fikirno dembiyadayada. Laakiin waxyiga ayaa wax badan laga odhan karaa xagga garsoorka. "Ciise Masiix, oo ah markhaatiga aaminka ah, curadka kuwii dhintay iyo amiirrada boqorrada dhulka jooga. Kan ina jecel oo kan dembiyadeenna naga furtay dhiiggiisa," (Muujintii 1,5). Ciise waa xaakin jecel dembiilayaasha uu aad u xukumo si uu isagu u dhintay iyaga iyo u istaageen iyaga meeshooda iyo iyaga! Waxaa taas ka sii dheer, wuxuu ka sara kiciyey kuwii dhintay iyada, oo uu u keenay nolosha iyo jiritaanka Aabbihii kan jeclaaday sida Ciise. Tani waxay naga buuxineysaa xasillooni iyo farxad. Maadaama Ciise qudhiisu yahay garsooraha, ma jirto sabab aan uga baqno xukunka.
Ilaah wuxuu jecel yahay dembiilayaasha oo aad adigu kujirtaa, ilaa Aabbuhu Wiilku u soo diray si uu uugu shaqeeyo dadka, oo u soo jiito dadka oo dhan, oo aad adigana xaggiisa ugu timaaddo, isagoo u beddelaya maskaxdeenna iyo qalbiyadeenna xagga Ruuxa Quduuska ah. "Aniga (Ciise) markii layga qaado dhulka, qof walba waan u jiidayaa ” (Yooxanaa 12,32), Ilaah iskuma dayo inuu ku helo waxyaabaha kugu qaldan inuu kaa fogeeyo boqortooyadiisa. Maya, wuxuu si daacad ah kuugu doonayaa boqortooyadiisa weligiisna kuu joojin maayo inuu jihadaas kuu jiheeyo.
U fiirso sida Ciise u qeexayo nolosha weligeed ah ee tuducdan ee Injiilka Yooxanaa: "Laakiin waa nolosha weligeed ah inay kugu gartaan inaad tahay Ilaaha runta ah oo keliya iyo cidda aad soo dirtay, Ciise Masiix." (Yooxanaa 17,3).
Ogaanshaha Ciise ma aha wax adag ama qalafsan. Ma jirto wax tilmaam ah oo gacan qarsoodi ah oo lagu muujinayo ama lagu xallinayo xujooyinka. Ciise wuxuu si fudud u yiri: "Ii kaalaya kulligiin kuwiin hawshaysan oo culaabaysan, Waxaan doonayaa inaan ku qalbi qaboojiyo" (Matayos 11,28).
Kaliya waa inaan u jeedno isaga. Wuxuu sameeyey wax kasta oo lagama maarmaan ah si ay kaaga dhigaan kuwo kugu habboon. Isagu wuu kaa cafiyey dembiyadiinna oo dhan. Sidii rasuul Bawlos u qoray: “Ilaah wuxuu inoo muujiyaa jacaylkiisa uu Masiixu inoogu dhintay markii aan weli dembaabnay. (Rooma 5,8). Ilaah ma sugo illaa inta aan kafiican nahay inta uusan ina cafin oo uu carruurtiisa inaga yeelo - Horey ayuu u sameeyay.
Markii aan u soo jeesanno Ilaah oo aan aaminno Ciise Masiix, waxaan galaynaa nolol cusub. Ruuxa Qudduuska ahi wuu inagu dhex jiraa oo wuxuu bilaabaa inuu xoqdo jajabka dembigayada - dabeecadaha dembiga, dabeecadaha, iyo qaababka fikirka - wuxuu innaga beddelayaa muuqaalka Masiix.
Mararka qaar xanuun ayey yeelan kartaa, laakiin sidoo kale waa xorayn iyo firfircooni. Natiijo ahaan, waxaan ku koray iimaan isla markaana waxaan baranaa oo aad u jeclahay Badbaadiyeheenna si aad iyo aad u badan. Iyo inbadan oo aan ka ogaanay Badbaadiyeheenna, kaasoo isaguna ah garsoorahayaga, ka yar inta aan ka baqno maxkamadda.
Haddii aan garanno Ciise, waxaan aaminsanahay Ciise waxaanan ku nasan karnaa kalsooni buuxda oo ku saabsan badbaadadeenna. Maaha sida aan ugu fiicanahay; taasi waligeed ma aysan aheyn ujeedada. Had iyo jeer waxay ku saabsan tahay sida uu u fiican yahay. Tani waa war wanaagsan - warka ugu wanaagsan ee qof kastaa maqli karo!